Beteriyada Accumulatorka ee 12v dc motor ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta
Baytariyada Accumulatorka ee 12v dc motor ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta.
Batari accumulator ah ee baabuurta ayaa lagu tilmaamay, gaar ahaan baytari accumulator-acid-acid, dhismaha block, kaas oo ka kooban gobolka ugu horreeya, kaas oo loo isticmaalo habka bilaabista baabuurta, iyo gobolka labaad, kaas oo loo isticmaalo shidista, iftiiminta iyo culaysyada kale ee baabuurka. Gobolka kowaad iyo kan labaad, oo ay doorbidayso xaalad kastaa waxay leedahay koronto lagu qiimeeyay 12v dc motor ee koonfurta Afrika baabuurta baabuurta, ayaa lagu habeeyay midba midka kale oo leh dhererka guud (H) kaas oo asal ahaan u dhigma wadarta dhererka batari ururiyaha caadiga ah ee baabuurta. Labada gobol ayaa la doorbidayaa inay midba midka kale korkiisa u habeeyaan waxaana laga yaabaa in xaalad kasta ay yeelato qiime farsamo oo la mid ah codsiga.
Maqaalku wuxuu ka hadlayaa soo bixitaanka baabuurta korontada (EVs) sida jiilka mustaqbalka ee gaadiidka ee Koonfur Afrika. Waxay ku dhawaaqaysaa helitaanka dhiirigelinta cusub ee EV oo soo jeedinaysa in soo saarayaasha iyo dawladduba ay markhaati ka noqdaan isbeddelka warshadaha. Waxaa la filayaa in baabuurta isku-dhafka ahi ay si xooggan ugu koraan warshadaha oo ay taageerayaan sharciyada deegaanka ee dawlado kala duwan. Waxa kale oo ay daaha ka qaadaysaa arrimaha qiimo-dhaca iyo dib-u-iibsiga ee ay la kulmeen warshaduhu.
Anshaxa Pyrometallurgy ee Mintek waxaa la bilaabay horraantii, si loo taageero warshadaha ferroalloy ee sii kordhaya ee Koonfur Afrika. Marka lagu daro noocyo kala duwan oo ikhtiyaari ah pyrometallurgical, Mintek wuxuu ku takhasusay 12v dc motor ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta wuxuuna leeyahay tas-hiilaad warshad tijaabo ah ilaa 5.6 MVA, iyo sidoo kale saldhig adag oo geedi socodka iyo qaabaynta arc. Nidaamyada warshadaha ayaa loo sameeyay wax soo saarka ferrochromium, dhalaalinta ilmenite, iyo ka soo kabashada kobalt ee dharbaaxada. Shaqadii ugu dambaysay ayaa laga qabtay hababka sida soo saarista ferronickel ee macdanta dambe, qiiqa iyo uumi magnesium, iyo ka soo kabashada biraha kooxda platinum ee xoolaha 'adag'.
Matoorka aan burushka lahayn ee 12v dc ee ku yaal koonfurta Afrika baabuurta baabuurta waa mishiin fudud oo adag, kaas oo helay codsi ka badan awood ballaadhan iyo kala duwanaansho xawli ah oo qaabab iyo joomatari kala duwan. Warqadani waxay soo bandhigaysaa qaabayn cusub oo loogu talagalay nidaamka curiye-dhaliye isku dhafan oo ku salaysan matoor DC ah oo aan burush lahayn iyada oo aan lahayn tignoolajiyada magnet joogto ah. Matoorka sheeko-yaqaanka ah ee la soo jeediyay wuxuu ka kooban yahay laba rotor oo ku tiirsan birlab iyo rotor (lakabyo), halkaasoo set kasta oo stator ka kooban yahay sagaal tiir oo salient ah oo ay ku duuban yihiin hareerahooda, rotor-ku wuxuu ka kooban yahay lix tiir oo salient ah oo aan lahayn dabaylo. Beerta birlabku waxay soo martaa hagaha rotor-ka ka dibna stator-ka oo ugu dambayntii dhammaystiray jidkeeda iyada oo loo marayo guryaha mootada. Si loo qiimeeyo waxqabadka mootada, laba nooc oo falanqayn ah, kuwaas oo ah farsamada tirooyinka iyo daraasadda tijaabada ah ayaa la adeegsaday. Falanqaynta nambarada falanqaynta walxaha xaddidan ayaa la adeegsadaa, halkaas oo sida daraasadda tijaabada ah, matoor nooca proto-ga ah ayaa la dhisay oo la tijaabiyay. Natiijooyinka la xisaabiyey ayaa si fiican u barbar dhigaya natiijooyinka imtixaanka.
Ganacsiga baabuurtu waa warshad caalami ah, baabuurta waxaa loo horumariyaa si caalami ah oo loogu talagalay suuq caalami ah. Kharashka awgeed, tirada kala duwanaanshaha ayaa xaddidan. Tani waxay keenaysaa dheelitirnaan jilicsan ee warshadaha baabuurtu waxay u baahan yihiin inay xalliyaan si joogto ah. Isticmaalayaasha dhaqamada kala duwan waxay leeyihiin dookhyo, khibrado kala duwan, kiisaska isticmaalka, iyo xaaladaha isticmaalka. Heerarka tignoolajiyadu way ku kala duwan yihiin gobol ilaa gobol. Xalalka is-dhexgalka isticmaale ee deegaanka ayaa faa'iido u leh buuxinta baahiyaha kala duwan. Dhanka kale, OEM-yada baabuurta waxay isku dayaan inay xaddidaan tirada kala duwanaanta baabuurta si ay u ilaaliyaan qiimaha iyo kakanaanta horumarka baabuurta iyo soo saarista mid hooseeya. Baabuurtu waxay inta badan sitaan sawir la xidhiidha summada; waxay la xiriiraan khibradaha isticmaale ee gaarka ah. Tusaale ahaan, baabuurta Porsche waxaa loo aqoonsan yahay Jarmal caadi ah waxayna sitaan sawirka u kala horreeyaan.
Hal-abuurka hadda waxa uu la xidhiidhaa gaadiidka tooska ah ee hadda socda oo leh qaab-dhismeed goob koronto oo cusub iyo hufnaan wadid heer sare ah, oo ka kooban: isku-xidhka daboolka; guri ku lifaaqan golaha daboolka; iyo tiro badan oo ah shirka harqood oo leh tiir kicinta; xudunta cudud leh oo leh tiro badan oo ilko tiirar ah oo ay ku wareegsan yihiin gariirad la falgasha tiirka kicinta; iyo xudunta udubdhexaadka ah oo leh qayb sare oo ka mid ah xudunta udubdhexaadka ah iyo tiro isku mid ah filimo dhuuban commutator A buraash lagu tuuray gudaha golaha daboolka oo si xushmad leh loola xiriiriyay commutator iyada oo loo marayo wareegga golaha armature, halkaas oo cirifka kicinta uu ka samaysan yahay tiro badan oo ah magnets joogto ah, mid kasta oo ka mid ah armature armatures oo ay ku jiraan commutator leh commutator ah, Saddex N tiir iyo saddex S tiir ayaa si kala duwan loo habeeyey, iyo 13 xabbo oo ilko tiirka iyo filimka khafiifka ah commutator ayaa radially ka samaysan yihiin xagal gaar ah oo lagu gartaa in uu yahay sameeyey.
Matoor 12v dc ah oo ku yaal koonfurta Afrika baabuurta baabuurta, qaab-dhismeedka sare ee baabuurta, qaab dhismeed kaabayaal ah oo xubno ka mid ah ay ku xidhan yihiin gees ka mid ah oo ku fidsan jihada dheer, laba taayir baabuur, macnaheedu waa in si madaxbannaan loo hagayo taayirrada marka la eego ayaa sheegay in qaab-dhismeedka jir cawinaad, ka dhigan tahay for springing sheegay in giraangiraha marka la eego ayaa sheegay in qaab-dhismeedka kaabayaal ah, ka dhigan tahay for resiliently xidha ayaa sheegay in qaab-dhismeedka jir kaaliyaha la sheegay superstructure gaariga, iyo ka dhigan tahay for resiliently xidha darafyadiisa ka soo horjeeda xubnaha torque ayaa sheegay in baabuur superstructure.
Qaybta matoorka hore ee gaadhiga cutubka korantada ayaa hakad ku jira si ay u lahaato dhaqdhaqaaqa gadaale ee la xakameeyey ee qaybta matoorka marka ay la kulmaan xoogag xad dhaaf ah jihada dhererka ee baabuurka inta uu shilku socdo. Waxa jira ugu yaraan hal dib u fuulid leh oo leh jidh adkaysi leh oo kala saaraya laba xubnood oo lagu hubiyay unugga korantada iyo qaybo ka mid ah dhismaha jidhka gaadhiga, siday u kala horreeyaan. Kordhinta dambe ee la sheegay waxay u oggolaanaysaa mid ka mid ah xubnaha dhaqdhaqaaq xaddidan marka loo eego kan kale iyadoo nuugaya shaqada qallafsanaanta. Marka cutubka korantadu uu sii socdo dib u soo celinta dhejinta gadaal ayaa si tartiib tartiib ah u burburtay, laakiin waxay haysaa muddo dheer oo ku filan si ay u oggolaato in cutubka korantadu uu ku dhufto guddi cowl ah oo ku yaal gadaasha qaybta mishiinka, sidaas darteed xakameynaya safarka cutubka korontada.
Hal-abuurkani waxa uu la xidhiidha horumarinta baabuurta iswada ee nooca kaas oo ay ku jiraan habka kulaylinta/qaboojinta xidhan kaas oo sidda dareeraha la cadaadiyey oo ka shaqeeya in ay isku beddelaan meelaha gudaha ah ee gaadhiga. Nidaamku waxa ku jira habab lagu kala beddelan karo kulaylka, macnaha heerkulka, xadhkaha dareeraha hagaya kuwaas oo lagu rakibay baallayaasha kuwaas oo u hagaya dhex-wareega meel gaadhiga la rabo ama meelaha gaadhiga la rabo. Iyadoo la raacayo ikhtiraacida, habayntu waxa ka mid ah unug hawleed (F) oo ay ku jiraan ugu yaraan hal deked laga soo galo dareeraha ka soo qulqulaya dareeraha qaada, iyo deked gudaha ah iyo deked ka bixista wareegga cimilada ee shakhsi kasta (K1, K2..) .) iyo deked ka soo baxda oo ay wadaagaan wareegyada cimiladu (K1, K2) oo dareeruhu dib loogu celinayo sidaha dareeraha ah, iyo xariiq dareere ah oo u oggolaanaya dareeraha inuu si toos ah ugu qulqulo khadka sahayda soo celinta ee xulashada hal ama in ka badan oo xariiqyo laan ah sida inay leexiyaan dhexdhexaadka soo qulqulaya.
Nidaam wareeg ah oo loogu talagalay bixinta korantada si loo xakameeyo qalabka 12v dc motor ee koonfurta Afrika baabuurta baabuurta, isagoo leh laynka korantada koowaad, xariiqda dhulka koowaad, xariiqda korontada labaad iyo xariiqda dhulka labaad, oo lagu garto in khadka koowaad ee dhulka iyo xariiqda dhulka ee labaad waxa lagu xidhi karaa bakhti la koontarooli karo, taasna waxa xidhidhiyaha macquulka ahi furaha marka xariiqda dhulka ugu horeysa uu xumaado ama go'o.
Qaab dhismeedka waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo baabuurta aan duuliyaha lahayn ee fudud oo jaban oo la habeyn karo. Dareemka 28 ee lagu ogaanayo xariijinta induction 26 ee lagu bixiyo jidka orodka, bidixda oo si wareeg ah u kaxeeya giraangiraha wadida saxda ah 18 iyo mootada 12v dc ee madaxbannaan ee baabuurta baabuurta ee koonfurta Afrika - cutubka 14 oo leh 20 kale haddii, marka dareenka 28 in baabuurku waxa uu sababay isbeddel ku jihaysan dhinaca midig ama bidix marka la eego xariijinta induction 26 waa la ogaadaa, shidma 2 Waxa la sheegay in la wado midig ama bidix giraangiraha 18 u dhiganta signal ka 8 hab - in yar oo yar adiga oo si aan kala go'a lahayn u wadi doona wakhti gaaban oo u dhexeeya 20 kale, si loo xakameeyo wareegtada taayirrada darawalnimada ee u dhigma 18, jihaynta gaadhiga Ku hagaaji baabuurka aan cidi wadin qaybta kantaroolka 24 si uu u dhigmo aaga soo gelida 26.
Dahaadh tamar- nuugaysa oo sanqadh dhimis ah oo loogu talagalay daboolka injiinka gaadhiga oo lagu habeeyay meel ka sarraysa matoorka, halkaas oo gogosha lagu dhejin karo dhinaca hoose ee daboolka mishiinka gaadhiga oo ka kooban hal ama in ka badan oo unug xidhan oo xumbada polyolefin ah iyo mid ama adkeysi badan, unug furan melamine-resin xumbada lakabyada oo la hydrophobicized iyo/ama oleophobicized. 2. Daboolka sida waafaqsan sheegashada 1, halkaas oo lakabka xumbo-xumada melamine-resin la hydrophobicized iyo oleophobicized iyo lakabka xumbo polyolefin ma laha. 3. Daboolka sida waafaqsan sheegashada 1 ama 2, halkaasoo xumbo polyolefin ay tahay xumbo polypropylene ah. 4. Daboolida sida waafaqsan sheegashooyinka 1 ilaa 3, kaas oo xumbo polyolefin ah iyo xumbo melamine-resin loo habeeyey qaab lakabyo isku xidhan. 5. Xidhmada sida waafaqsan sheegashooyinka 1 ilaa 4, kaas oo lakabyada si farsamaysan isugu xidhan yihiin.
Shaaciyey waa habayn wareeg ah oo loogu talagalay bixinta awoodda lagu xakameynayo aaladaha baabuurta, gaar ahaan aaladaha kantaroolka bireega ee trailer-ka. Habaynta wareegtada ee la sheegay waxa ay ka kooban tahay laba fiilood oo koronto ah, laba fiilo oo dhulka hoostiisa ah, iyo furaha (S1) oo u oggolaanaya in labada xadhig ee dhulka la isku xidho. Dabooluhu waxa lagu xidhaa iyadoo la adeegsanayo wareeg caqli gal ah marka xadhigga ugu horreeya ee dajinta uu xumaado ama go'o. Labada fiilood ee dhulka dhigaya gebi ahaanba way kala go'aan midba midka kale inta lagu jiro hawlgalka siman sida wax falcelin ah kama dhici karto fiilada labaad ee dhulka ilaa kantaroolka.
Xawaraha matoorka 12v dc ee goonida loo xiiseeyo ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta waxaa lagu xakameyn karaa hoos iyo in ka badan xawaaraha la qiimeeyay iyadoo la isticmaalayo beddeliyaha buck Waraaqdani waxay soo bandhigaysaa habka xakamaynta xawaaraha iyadoo kala duwanaanaysa danab qalabaysan ee matoorka 12v dc ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika. Chopper-ku waxa uu siinayaa danab doorsooma qalabka matoorka si loo gaadho xawaaraha la rabo iyada oo la isticmaalayo kontaroolaha Proportional Integral (PI). Sababta ka dambeysa isticmaalka kontoroolka PI waa inay meesha ka saartaa daahitaanka waxayna bixisaa xakameyn degdeg ah. Nashqadaynta matoorka DC ee goonida u faraxsan ayaa la sameeyay waxaana la helay qaabeynta dhameystiran ee habka wadista DC. Calaamadaha tixraaca waxa la barbar dhigaya calaamada side saddex xagal iyo in la soo saaro garaaca PWM ee beddelka chopper. Qaabka jilitaanka waxa lagu dhisay MATLAB/SIMULINK. Halbeegyada wax-soo-saarka ee la-midka ah ee matoorka DC-ga sida; hadda armature, danab, xawaaraha, torque, iyo hadda goobta ayaa la falanqeeyay. Natiijooyinka waxa kale oo lagu xaqiijiyaa iyada oo la dhisayo nooc tijaabo ah oo ah 12V, 24W, DC motor iyo hirgelinta kontaroolaha Isku-xidhka Isku-dhafka ah ee ku jira.
Marka laga eego hababka caadiga ah kuwan waa laba qalab oo soo saara matoor iyo koronto siday u kala horreeyaan. Halkan warqadani waxay ka hadlaysaa labada nooc ee tamarta ka timaada hal mashiin. Marka la barbardhigo hababka caadiga ah mishiinkani wuxuu u baahan yahay tamar hoose oo ka timaada sahayda 12V DC. Gelitaankan ku xidhan gariiradda la qaybiyey, rotor magnet joogto ah waxa uu gooyaa awoodda qulqulka ee horumarsan isla mar ahaantaana qaar ka mid ah gariiradda la qaybiyey ayaa mar kale soo ururisa tamartan sidii wax soo saar koronto ah. Sababo la xiriira koronto-soo-saarka magnet-ka joogtada ah ee rotor-ka-soo-saarka tamarta ayaa ka badan wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka korontadu waa ugu yaraan 50% saadka wax-gelinta. Qalabka waxa lagu tijaabiyaa iyada oo aan wax rar ah lahayn, culays koronto & culays farsamo leh. Natiijooyinka tijaabada waxay la jaan qaadayaan fikrado isku mid ah. Sidaa darteed natiijooyinka tijaabada ah, gabagabada ayaa ah wax soo saar farsamo oo sarreeya iyo soo-saarka korantada oo leh heer awood yar oo qiimo yar marka loo eego hababka caadiga ah.
Proyek Akhir ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan 12v dc motor in south africa automotive places, sebagai pengendali motor digunakan remote Sony yang bia digunakan untuk TV. Dengan adanya alat ini maka akan memudahkan kita untuk mengendalikan putaran motor tanpa harus berhubungan langsung dengan alat tersebut. Metode yang digunakan dalam mengendalikan putaran motor DC ini menggunakan sistem PWM (Pulse Width Modulation), pengendalian dilakukan dengan mengatur tegangan terminal yang tersambung ke motor DC. Hubungan antara kecepatan motor DC dengan tegangan terminal adalah berbanding lurus, sehingga semakin kecil tegangan maka kecepatan motor DC akan menurun. Si kastaba ha ahaatee, habka loo isticmaalo nidaamka, xawaaraha sensor yang befungsi untuk mengukur kecepatan motor DC, LCD yang digunakan untuk menampilkan kecepatan motor DC, iyo remote kontrol yang berfungsi untuk mengatur kecepatan 12v dc motor ee koonfurta Afrika baabuurta baabuurta. Waa in la ogaadaa in nidaamka IC AT89S51 sebagai IC Pengendali nidaamka.
Baabuurka Korontada (EV) waa baabuurta u adeegsata koronto ahaan isha korontadeeda. Korontada waxaa laga dhalin karaa siyaabo badan sida qoraxda, dabaysha iyo biyaha. EV waxay soo saari doontaa ku dhawaad ​​eber qiiqa. EV waxay isticmaashay matoor hadda toos ah (DC) sidii ay ugu beddeshay mishiinka gubashada gudaha (ICE) ee gaadiidka caadiga ah iyo gaadhiga korantada ee isku-dhafan (HEV). Baabuurka korontada ku shaqeeya ee baytarigu (BEV) waxa uu u isticmaalayaa baytari ahaan isha korantada oo ka duwan HEV kuwaas oo ICE u isticmaalaya matoor ahaan iyo sida il koronto oo labaad oo wali soo saarta wasakhowga hawada. Tamarta loogu talagalay BEV waxaa soo saara batari ilaa matoorka DC. Qaybtan waxaa loo yaqaan maaraynta tamarta batteriga ilaa matoorka DC. Waxaa jira hab lagu qiyaaso heerka dallacaadda (SOC) ee batteriga. Mashruucan, tijaabo ayaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo 5 hooras (HP) DC motor iyo baytari-ashitada rasaasta si loo qiyaaso SOC iyadoo la isticmaalayo korantada wareegga furan (OCV) ee baytariga. Dallacaadda profile, xogta waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo 12V 20A dabeysha oo ku xiran batari taxane ah.
Baabuurka korontada ayaa laga yaabaa inuu u matalo fursado cusub waddan kasta iyo adeegyadiisa korontada. Isticmaalka baahsan ee baabuurta korantada waxay yarayn kartaa isticmaalka saliidda dibadda iyo gudaha labadaba, beddelka shidaalka badan sida dhuxusha iyo tamarta nukliyeerka. Tan iyo ku dallaca baabuurta korantada 12v dc motor ee koonfurta afrika baabuurta baabuurta lagu dhammayn karo ilaa xad inta lagu jiro utility saacadaha ka baxsan-sare, baabuurta korontada ka qayb qaadan karaan si loo hagaajiyo arrimaha culayska korontada, natiijada, yaraynta celceliska qiimaha jiilka. Dhibaatadu waxay soo baxdaa marka matoorka DC uusan si toos ah u istaagin sababtoo ah xaalada aan caadiga ahayn oo ay keento lumista tamarta iyo waxyeelada mashiinka laftiisa. Warqadani waxay inta badan ku saabsan tahay xakamaynta ON iyo OFF ee 12v dc motor ee koonfurta Afrika baabuurta baabuurta marka rarku si weyn u kala duwan yahay. Daraasaddan, mishiinka DC wuxuu ku xiran yahay dareemayaasha hadda ee ku xiran kontaroolaha PIC iyo xoojinta IC waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo 12V ilaa 24V batari dib loo buuxin karo kaas oo ay bixiso guddi cadceedda. PIC waxaa loo isticmaalaa in si toos ah loo joojiyo mootada DC si loo badbaadiyo Baabuurka Korontada oo loo yareeyo tamarta luminaysa.
Xakameeyaha matoorka DC wuxuu ka kooban yahay wax soo saarka beddelaadda oo loo habeeyey in lagu lammaaniyo mishiinka DC; curiyaha beddelka wax soo saarka oo ay weheliso curiyaha beddelka wax soo saarka; calaamada ballaca garaaca wadnaha ee la habeeyey (PWM) oo ay weheliso terminalka kantaroolka ee curiyaha beddelka gelinta iyo danab sahayda ah oo lagu dabaqay curiyaha beddelka wax soo saarka. Shabakadda wax-iska-caabbinta (RC) waxaa laga yaabaa in lagu xidho koontaroolka kantaroolka walxaha beddelka wax soo saarka, iyada oo shabakadda RC loo habeeyey si ay calaamadda PWM u dhexgeliso matoor 12v dc ah oo ku yaal koonfurta Afrika baabuurta baabuurta. Shabakadda ugu horreysa ee iska caabbinta ayaa laga yaabaa in loo habeeyo si ay eexda u dejiso curiyaha beddelka wax soo saarka marka element beddelka wax soo saarka la damiyo, iyo shabakad labaad oo iska caabin ah ayaa laga yaabaa in loo habeeyo si ay u dejiso eexda curiyaha beddelka wax soo saarka marka element beddelka wax soo saarka la shido. , sida in kantarooluhu uu waxtar u leeyahay inuu siiyo eber-ilaa-buuxa kontoroolka korantada matoorka 12v dc ee baabuurta baabuurta ee Koonfur Afrika.
Koronto la isku halayn karo oo hufanna waa shardi aan laga maarmi karin oo loo maro horumarka ummad kasta maadaama ay tahay isha ugu wayn ee kaxaysa tignoolajiyada badankeeda, sidaa awgeed waxa loo baahan yahay ilo tamareed oo kharash-ku-ool ah oo deegaanka u saaxiib ah. Warqadani waxay qeexaysaa naqshadaynta iyo hirgelinta koronto-dhaliyaha AC kaas oo tamarta korantada ka soo saara beddelka isticmaalaya matoor DC oo ah dhaqdhaqaaqa koowaad. Usha usheeda dhexe ee beddelka ayaa si toos ah loogu xidhay matoor DC, kaas oo uu ku shaqaynayey baytari hadda sarreeya. Matoorka DC wuxuu ku wareegaa seefta beddelka ee gariiradda garoonka isagoo xawaare sare ku socda marka la shido. Tani waxay keenaysaa laba danab wax soo saar oo ac ah oo ah 12V iyo 220V oo ka imanaya beddelka. Soo saarida 12V waxay ahayd jawaab celin si loogu shubo baytariga iyadoo la adeegsanayo diode halka soosaarka 220V loo isticmaalay in lagu kaxeeyo culays kasta oo ku xidhan koronto dhaliyaha. Wax soo saarka 12V wuxuu bixiyaa dib u dallacaadda joogtada ah ee baytariga maadaama matoorka DC uu tamar ka qaato baytariga dib lagu dallaci karo.